iOS 12 ကို iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင်တပ်ဆင်နည်း | Gadget သတင်း
Ignatius ခန်းမ | | မိုဘိုင်း, tablets
နှစ်စဉ်ကျင်းပသော WWDC ကို Apple မှကျင်းပခြင်းသည်စက်တင်ဘာလမှစတင်မည့်အရာများအတွက်အချက်ပြဖြစ်သည်။ သော့ချက်စကားလုံးပြီးဆုံးသည်နှင့် Apple မှပြုလုပ်သည် ပထမ ဦး ဆုံး macOS နှင့် iOS ကို၏ beta ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Device များတွင်တပ်ဆင်နိုင်လိမ့်မည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအက်ပဲလ်သည်အများဆိုင် beta ပရိုဂရမ်မှတဆင့် iOS beta ကိုစမ်းသပ်နိုင်သည့်သုံးစွဲသူများကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် developer မဟုတ်သူများသုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မဖြန့်ချိမီသုံးစွဲရန်ခွင့်ပြုသည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ iOS 12 ဟာခြွင်းချက်မရှိပါ။ ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြမယ် iOS 12 ကို iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင်မည်သို့ install ရမည်နည်း.
installation ကိုမစတင်မှီပထမ beta ဖြစ်ခြင်းသည်သီအိုရီအရအလုပ်လုပ်သော်လည်း၎င်းသည်မျှော်လင့်မထားသော reboots၊ application ချို့ယွင်းမှုများ၊ operating bug များ၊ မရရှိနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်တည်ငြိမ်မှုပြcertainနာအချို့ကိုပြသနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို installation ကိုပြန်လည်စဉ်းစားမိစေနိုင်တဲ့ပြproblemနာပါ။ အလွန်အကျွံဘက်ထရီစားသုံးမှု.
1 IOS 12 သဟဇာတထုတ်ကုန်
2 ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ
3 iOS 12 Developer Beta ကို Install လုပ်ပါ
4 iOS 12 Public Beta ကို Install လုပ်ပါ
IOS 12 သဟဇာတထုတ်ကုန်
ပထမဆုံးနှင့် installation လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ device ကိုသဟဇာတလျှင်။ iOS 11 ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ 32-bit ပရိုဆက်ဆာများမှစီမံခန့်ခွဲသောကိရိယာများအားလုံးသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုမခံရတော့ပါ။ ယခုနှစ်တွင် iOS 12 နှင့်အတူ Apple သည်ထိုစာရင်းမှမည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမှမဖယ်ရှားနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် iOS 12 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဆိပ်ကမ်းများသည် iOS 11 နှင့်ဆင်တူသည်။
iPhone ကို 8 Plus အား
iPhone ကို7Plus အား
iPad Pro ၁၂.၉″ (ဒုတိယမျိုးဆက်)
iPad Pro ၁၂.၉″ (ပထမမျိုးဆက်)
အိုင်ပက် Air လေကြောင်းလိုင်း 2
iPad mini ကို 4
iPad mini ကို 3
iPad mini ကို 2
iPod touch ဆth္ဌမမျိုးဆက်
iOS 12 ဗားရှင်းအသစ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုဘဲတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတစ်ခုခုမှားယွင်းနေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုပြန်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသည်ကိုသတိရသင့်သည်။ iTunes မှတဆင့်အရန်ကူးပါ.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် iCloud တွင်နေရာချထားပြီး Apple Cloud သိုလှောင်မှုစနစ်၏ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုမြှင့်တင်လိုက်ပါက၊ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးအကြောင်းအရာအားလုံးသည်မိုးတိမ်တွင်သိုလှောင်ထားသောကြောင့်တစ်ခုခုပျက်ကွက်လျှင်မည်သည့်ဒေတာကိုမျှမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။
beta တစ်ခုအနေဖြင့်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ရှိဗားရှင်း၏ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ထားပါက၊ စစ်ဆင်ရေးသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်။ ခြစ်ရာကနေသန့်ရှင်းတဲ့ install လုပ်ဆောင်ပါယခင်သိုထားသောပြbackupနာအားလုံးကိုဆွဲယူရန်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ယခင်အရန်ကူးကိုမတင်ဘဲ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် application အချို့အတွင်းရှိဖိုင်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိရမည် သူတို့တစ်တွေမိတ္တူလုပ်ပါ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်မည်သည့် cloud နှင့်မတူညီပါက iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive ဖြစ်ပါစေ။
messaging လောက၏မိဖုရားပလက်ဖောင်းဖြစ်သော WhatsApp၊ ၎င်းမှာဆာဗာများပေါ်တွင်စကားပြောဆိုမှုများကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိသောအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် iCloud တွင်ယခင် backup တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါiOS 12 ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့် application ကိုထပ်မံ download လုပ်ပြီးလျှင်ပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်သည်ကိုကူးယူပါ။ မိတ္တူကူးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Settings> Chats> Chats သို့သွားပြီး Make Backup ကိုနှိပ်ပါ။
iOS 12 Developer Beta ကို Install လုပ်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် developer တစ် ဦး ဖြစ်ပါက iOS 12 ၏ပထမဆုံး beta ကို download လုပ်ရန်သင်၏ device မှ developer portal ကိုသွားရန်လိုအပ်သည်။ လက်မှတ်ကို download လုပ်ပါ ဒီနည်းကိုလင့်ခ်တွင် ၎င်းသည်သင့်အားပထမ beta သာမက iOS 12 မှထပ်မံထုတ်လွှင့်သောနောက်ဆက်တွဲ beta များကိုပါဒေါင်းလုပ်ချရန်ခွင့်ပြုသည်။
iOS 12 Public Beta ကို Install လုပ်ပါ
သင်ဟာ developer တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် iOS 12 ရဲ့ပထမဆုံးအများသုံး beta ကိုစမ်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Apple လိုသတင်းဆိုးတွေပါ iOS 12 ၏ပထမဆုံးအများသုံး beta ကိုယခုလနှောင်းပိုင်းအထိမထုတ်လုပ်နိုင်သေးပါထို့ကြောင့်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမှာအင်တာနက်ကို iOS developer Certificate အတွက်ရှာဖွေခြင်းသည် developer version ကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာပဲရှာဖွေရမယ်။
ဒါပေမယ့်သင်ကအလျင်စလိုမဟုတ်ဘဲ Apple ကိုစတင်ရန်စောင့်နေလိုလျှင် iOS 12 အများသုံး betaသင်သည် Apple ၏အများပြည်သူသုံး beta ပရိုဂရမ်ကိုအရင်လေ့လာသင့်သည် သင်၏ Apple ID အသေးစိတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ Apple ၏အများပြည်သူသုံး beta ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုသူများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရမည် ကိရိယာကိုယ်နှိုက်ကနေ လက်မှတ်ရပြီဆိုလျှင်သင်က၎င်းကိုသင်တပ်ဆင်လိုသည့်စက်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ကူးယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးတာနဲ့ငါတို့ရှိသည် လက်မှတ်ကို download လုပ်, ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပြီးပါက၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ၎င်းကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ Settings> General> Software update ကိုသွားပါ။ ဤအပိုင်းတွင် iOS 12 ၏ပထမဆုံး beta အပြင် Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီစတင်မိတ်ဆက်သည့် beta အားလုံးပေါ်လာသင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » iOS 12 ကို iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင်တပ်ဆင်နည်း
WWDC12 တွင် Apple က iOS 18 ၏အသစ်အဆန်းများကိုတင်ပြခဲ့သည်